Shiinaha Warshadaha Gelatin warshad Rinjiga iyo alaableyda | Gelken
Heer sare wax soo saarka
Himilada & Himilada
Caafimaadka iyo nafaqada
Gelatin la cuni karo
Gelatin Wixii Nacnac Cirridka
Gelatin loogu talagalay Marshmallow
Gelatin loogu talagalay Kaabsoosha adag
Gelatin loogu talagalay Softgel
Koolajyada loogu talagalay qurxinta
Kulliyadaha Baarka Nafaqada
Kolajka loogu talagalay cabitaanka adag
Kalluunka Collagen Peptide
Kalluunka Collagen Peptides
2g Xaashida Gelatin
2.5g Xaashida Gelatin
3g Xaashida Gelatin
5g Xaashida Gelatin
Xaashida Gelatin ilaa Budada
Xaashida 'Gelat Transparency High' ee Macmacaanka
Xawaaraha Jelly Speed ​​Muuska
Dhexdhexaad Xawaaraha Jelly Xabagta
Buugga Xawaaraha Gaaban Jelly Glue
Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay koollo
Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay Xabagta Jelly
Warshadaha Gelatin ee ciyaarta
Warshadaha Gelatin ee Rinjiga
Feed Fasalka Collagen
Lafta xabagta xabagta
Kaabsal adag oo faaruq ah
Hufnaan Sare Gelatin S ...
Warshadaha Gelatin ee rinjiga waxaa loo isticmaali karaa kubbadaha rinjiga. Waxaa jira noocyo iyo midabbo badan oo kubbadda ranjiga ah, iibsadayaashuna waxay leeyihiin shuruudo kaladuwan oo loogu talagalay kubbadaha ranjiga.Warshadaha Gelatin ee rinjiga waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo noocyo kala duwan oo kubbado rinji ah oo midabbo kala duwan leh.
Paintball waa kaabsal wareegsan oo ay ka buuxaan saliidaha la cuno iyo midabbo. Markay ku dhufato qof ama wax, waxay sameysaa calaamado midabbo leh oo lagu kala sooci karo. Doorka gelatin-warshadeed ee khaaska ah ee loo yaqaan 'paintball' waa in la dhiso isku dheelitirka ugu wanaagsan ee u dhexeeya dabacsanaanta iyo jilicsanaanta, sidaa darteedna kubbadda ranjiga ahi weli way jirtaa ka hor toogashada, kaliya markay taabato dadka ama waxyaabaha, haddii kale, ma sababi doonto dillaac, halkii waxyeelo.
Warshado badan iyo dawlado badan ayaa soo dhoofiya gelatinkan si ay u sameeyaan kubbado rinji oo loogu talagalay bannaanka iyo laylisyada milateriga halkii laga dhigi lahaa rasaasta dhabta ah.
Gelatin warshad loogu talagalay rinjiga ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo daboolka rinjiga. Hawsha gaarka ah ee gelatin-soosaarka warshaduhu waa awoodda jel ee kuleylka leh. Qaaciddada ku saleysan gelatin waxay dhalaali doontaa marka ay qabowdo oo dhalaasho marka la kululeeyo. Beddelaaddaani si dhakhso leh ayey u dhici kartaa waana lagu celin karaa iyada oo aan la helin isbeddellada dabeecadda ee muhiimka ah. Waxyaabaha jirka iyo kiimikada ee gelatin, iyo isu geynta sheyga ugu dambeeya waxay leeyihiin nidaam deggan oo hagaagsan oo si weyn u dheereyn kara nolosha shelf ee badeecada. Si kasta oo dalab u yahay, gelatin wuu isku dhejin karaa maaddooyinka ama qaybaha. Gelatin warshadaha waxay leedahay astaamaha soo socda:
u 100% alaab dabiici ah, amaan ah oo caafimaad leh isticmaal badan.
u Waxyaalo jaalle ama bunni khafiif ah, ur lahayn, wasakhda muuqata
u Qaab-dhismeedka ugu muhiimsan, halabuurka iyo waxqabadka gelatin-warshadaha wali waxay haysaa astaamo badan oo ah borotiinka dabiiciga ah, sidaa darteed waxaa jira xiriir dabiici ah oo u dhexeeya gelatin-warshadeed iyo fiber fiber, gelatin warshad wanaagsan oo taxane ah oo kiimikooyin maqaar ah, oo loo isticmaalo dib-u-eegista maqaarka, buuxinta, hooska iyo dhammeynta, waxay ku guuleysan doontaa saameynta ugu habboon ee wax ka beddelka.
Way fududahay in la dhuuqo biyaha oo noqda mid jilicsan, oo lagu qasi karo biyaha kulul, laguma milmi karo ether, ethanol ama chloroform, laakiin lagu milmi karo acetic acid, salicylic acid iyo aashitoyinka kale ee dabiiciga ah. Cufnaanta ayaa ah 1.37 g / cm 2
Hore: Warshadaha Gelatin ee ciyaarta
Xiga: Gelatin Farsamo
Gelken Gelatin wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta gelatin iyo kolajka biyaha lagu kaydiyo. Qadka alaabtu wuxuu daboolayaa in kabadan 10 nooc sida gelatin la cuni karo, gelatin daawo, gelatin warshadeed, xaashi gelatin ah iyo kolajiin biyo leh.
402, Dhismaha 4, Duulista FTZ Plaza. Lambarka 420, Gaoqi North Road, Xiamen 361006 Shiinaha
Gali emailkaaga waxaanan kuu soo diri doonaa qorshooyinka macluumaadka ugu dambeeyay.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2021: Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.